GAC ရဲ့ compact SUV GS4 2018 ကတော့ မြင်မြင်ခြင်းနှစ်လိုဖွယ်အဆင်းရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်။ အတွင်းခန်းက လုံလုံလောက်လောက်ကျယ်ဝန်းသလို မောင်းနှင်မှုအပိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်း လိုအပ်တာထက်ကို ပိုပြီးအားကောင်းမောင်းသန်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းပညာအဆင့်မြင့်မားမှုအပိုင်းနဲ့ တချို့သော ထိတွေ့မှုနည်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးပိုင်းတွေမှာတော့ 2018 မော်ဒယ်ဖြစ်တာနဲ့အညီ အားနည်းချက်တွေရှိလာပြီဆိုတာ တွေ့ရတယ်။
ဈေးနှုန်း : $43,888 (Yangon License နှင့် Income Tax မပါ)
Driver display ၏အချက်အလက်စုံလင်မှု
Suspension မှာ buffer များသဖြင့် ငြိမ့်ညောင်းလွန်းခြင်း
တန်ဖိုးနှင့်ဈေးနှုန်းချိန်ဆပါက ဈေးနှုန်းဘက်တွင် အလေးသာနေခြင်း
GAC Group ဆိုတာကတော့ တရုတ် Guangzhou အခြေစိုက် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Guangzhou Automobile Group Co., Ltd လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ GAC ကနေပြီး လူစီးကားတွေအဖြစ် Trumpchi အမှတ်တံဆိပ်၊ လူစီးနဲ့ လုပ်ငန်းသုံးကားတွေအဖြစ် Gonow အမှတ်တံဆိပ် (ယခုအချိန်တွင် ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့) ၊ SUV အမျိုးအစားတွေကို အထူးပြုထုတ်လုပ်တဲ့ Changfeng Motor အမှတ်တံဆိပ်များအပြင် လျှပ်စစ်ကားတွေကိုလည်း GAC NE (GAC New Energy) အဖြစ် Aion အမှတ်တံဆိပ်အပြင် Trumpchi အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပါ ထုတ်လုပ်နေတာပါ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မြောက်အမေရိကန် နိုင်ငံတကာ မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲမှာ GAC Motor ရဲ့ GS7 ဟာ “A new generation of excellent SUV” award နဲ့ Trumpchi GS7 ဟာ “Outstanding Premiere Car Model” award တွေရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
GAC ရဲ့ GS4 2018 ကို ရှေ့ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင် daytime running lamp သဘောမျိုး အလျားလိုက်နဲ့ ဒေါင်လိုက် LED မီးတန်းနှစ်ခုပါတယ်။ ရှေ့မီးကြီးကတော့ projector halogen မီးပါ။ Reflector တွေထက်တော့ သာတယ်လို့ဆိုရမယ်။ အောက်ဘက် ဒေါင်လိုက် DRL ရဲ့ဘေးမှာ fog lamps တွေတပ်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အရမ်းကြီး ထူးထူးခြားခြားမရှိလှပေမဲ့ မြင်မြင်ခြင်း “ဟာ… မိုက်တယ်” ဆိုပြီး ပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုး။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ grille မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ chrome တွေကတော့ chrome အစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ GS4 2018 ကိုနံဘေးကကြည့်မယ်ဆိုရင် aerodynamic ပိုင်းကောင်းမွန်မှုရှိပြီး ကျစ်လစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ကြရမှာပါ။ LED ဘရိတ်မီးတွေအသုံးပြုထားတဲ့ကားရဲ့နောက်ပိုင်းကလည်း ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
“စိတ်တိုင်းမကျမိတာတစ်ခုကတော့ နောက်ပစ္စည်းထားခန်း တံခါးပါ။ Electric motor မဖြစ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ Motor မပါတဲ့ boot တံခါးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲ။ ပြဿနာက တံခါးဖွင့်ဖို့လက်ကိုင်နေရာပါ။ GAC GS4 2018 နောက်ဖုံးက နောက်ဖုံးအဆုံးနဲ့ နောက် bumper ကြားထဲကို လက်ချောင်းကလေးတွေ ထိုးထည့်ပြီးမှ ကပ်ကပ်သပ်သပ်လေးဖွင့်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ exhaust ပေါက်ပါ။ GAC GS4 2018 ရဲ့ exhaust ပေါက်ကလည်း Mercedes A-Class လိုမျိုးပဲ ပုံစံကသာနှစ်ပေါက်ဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းက ရိုးရိုးမြေစိုက် တစ်ပေါက်သာပါဝင်ပါတယ်။”
GAC GS4 ရဲ့အပြင်ဒီဇိုင်းကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးချိန်မှာတော့ ကားရဲ့တန်ဖိုးဟာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်အခြေအနေအရ မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာ တွေ့ကြရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ 2018 မော်ဒယ်ဖြစ်နေတာကတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပါပဲ။
Remote သော့ကိုနှိပ်စရာမလိုဘဲ တံခါးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန် အတွင်းခန်းမှာမြင်ရတဲ့ အပေါက်ငယ်လေးတွေပါတဲ့ သားရေသားထိုင်ခုံတွေကတော့ အားရစရာပါ။ အအေးပေးစနစ်မရဘဲ အပူပေးစနစ်ပဲ ရရှိတယ်ဆိုတာကတော့ ပုခုံးတွန့်မိရုံလောက်ပါပဲ။ ထိုင်ခုံပုံစံ၊ အကျယ်အဝန်းတွေကတော့ ရှေ့ဘက်ခြမ်းရော နောက်ဘက်ခြမ်းပါ ထိုင်ရ၊ ပြုရ လုံလုံလောက်လောက်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ သားရေသားအုပ် steering ကလည်း ကိုင်ရ၊ တွယ်ရ အလောတော်ပါပဲ။
Electric motor နဲ့အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ sunroof ပါတယ်။ အဖုံးကတော့ Mazda6လိုမျိုး လက်နဲ့ဆွဲပြီး ပိတ်/ဖွင့် လုပ်ရတာပါ။ 8-inch infotainment display က ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် ရုပ်ထွက်မဆိုးလှပေမဲ့ ကင်မရာမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ ပြတ်သားကြည်လင်မှု နည်းပါတယ်။ Touchscreen ဖြစ်ပြီး တုံ့ပြန်မှုကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ Apple CarPlay ရော Android Auto တွေတော့မရပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက ဂြိုဟ်တုလမ်းညွှန်တော့ built-in ပါဝင်ပေမဲ့ ကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာတော့ အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။
Automatic climate control တွေ၊ ရှေ့နောက် air conditioning စနစ်တွေပါတာကတော့ ပူအိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်ရာသီဥတုအတွက် သင့်လျော်မှုအထူးရှိပါတယ်။ တပ်ဆင်ထားတဲ့ 6-speakers ရဲ့အသံအရည်အသွေးပိုင်း ကောင်းမွန်မှုရှိတာကလည်း သောတအာရုံခံစားလိုသူတွေအတွက် ကျေနပ်စရာ ကောင်းပါတယ်။
“အတွင်းခန်းရဲ့ သဘောကျစရာအကောင်းဆုံးကတော့ infotainment မဟုတ်ဘဲ driver display ဖြစ်နေတာ နှမြောဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျ။ GAC GS4 2018 ရဲ့ driver display က အရောင်တစ်ရောင်တည်းဖြစ်ပေမဲ့ tire pressure ၊ tire temperature ၊ outside temperature ၊ battery voltage ၊ fuel range ၊ current fuel economy ၊ average fuel economy ၊ average speed ၊ driving time စသဖြင့်ပေါ့၊ တော်တော်ကြီးကို စုံစုံလင်လင်ကြည့်လို့ရတာက သဘောကျစရာပါပဲ။”
နေ့စဉ်အသုံးပြုဖို့အတွက် လက်တွေ့ကျ/မကျဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ GAC ရဲ့ GS4 2018 ဟာ မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့ ကားတစ်စီးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှေ့လူစီးခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတယ်။ နောက်လူစီးခန်းကလည်း armrest တွေ cupholder တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အပြင် USB port နှစ်ခုသပ်သပ်ပါတဲ့အတွက် ခရီးဝေးသွားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်၊ လူအပြည့်တင်ဆောင်ပြီးနေ့စဉ်မောင်းနှင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်အတွက် တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်နိုင်တဲ့ သားရေသားအုပ် နောက်လူစီးခုံတွေပါ။ Legroom ရော headroom ရော အိုကေပါတယ်။
နောက်ပစ္စည်းထားခန်းဝင်ဆံ့မှုကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် 450-litre ရှိပြီး နောက်ခုံတွေအားလုံးခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ 1,450-litre အထိဝင်ဆံ့မှုရရှိနိုင်တဲ့အတွက် မဆိုးပါဘူး။ တော်တန်ရုံ ခရီးဆောင်အိတ်အကြီး နှစ်လုံးလောက် ကောင်းကောင်းကြီးဝင်ဆံ့ပါတယ်။ နောက်ထိုင်ခုံတွေကို 60:40 ခေါက်လို့ရတာကလည်းမဆိုးလှပါဘူး။ နောက်ပစ္စည်းထားခန်းကိုဖွင့်တဲ့နေရာက ပြောစရာဖြစ်ပေမဲ့ တံခါးလှန်ဖွင့်ထားချိန် မီး ထွန်းထားပေးမှုကတော့ သဘောကျစရာပါ။
“360° ကင်မရာတပ်ဆင်ပေးထားတာကတော့ လက်တွေ့ပိုင်းမှာ အကျိုးများမှာသေချာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက safety ပိုင်း။ ABS ၊ EBD ၊​ ESP ၊ HBA ၊ HHC & HDC ၊ EPB စတာတွေအပြင် လေအိတ်ပတ်လည် ရှစ်လုံးပါဝင်တဲ့အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုင်း ကောင်းမွန်မှုရှိပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက blind spot detection system နဲ့ safety ပိုင်းမှာ ခေတ်သိပ်စားနေတဲ့ EBA (Emergency Brake Assist) မပါဝင်ပါဘူး။ Adaptive မဖြစ်သေးပေမဲ့ cruise control ပါတာကတော့ အမြန်လမ်းသမားတွေအကြိုက်ပါပဲ။ Traction control ပါတာကတော့ လမ်းအခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်မှုရှိပါတယ်။”
မောင်းနှင်မှုအပိုင်းမှာ ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ အားကောင်းမောင်းသန်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရရှိပါတယ်။ 1.5-litre ဓါတ်ဆီ Turbo အင်ဂျင်ဟာ အမြင့်ဆုံးပါဝါထုတ်လွှတ်မှု 151hp အထိရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ပါဝါပိုင်း စိတ်ပူစရာသိပ်မရှိပါဘူး။ လမ်းအဖြောင့်တွေမှာ အရှိန်ပြင်းပြင်းပြင်းမောင်းနှင်နိုင်သလို အကွေ့တွေမှာလည်း ပြေပြစ်မှုရှိပါတယ်။
စိတ်တိုင်းမကျတာလေးတစ်ခုကတော့ suspension နဲ့ chassis ပိုင်း buffer များတာပါ။ အဲဒီအတွက် မောင်းနှင်သူဟာ ကိုယ့်အရှိန်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပြီး သတိထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် အကွေ့တွေဘာတွေမှာ သတိထားရမှာပါ။ ချောမွေ့ပြေပြစ်လွန်းအားကြီးတော့ ကိုယ့်မြန်နှုန်းကိုယ် သတိထားနိုင်မှသာ တော်ကာကျပါလိမ့်မယ်။
6-speed automatic gearbox ရဲ့ ဂီယာအကူးပြောင်းကညက်တယ်။ Semi-auto ပုံစံမျိုးလည်းမောင်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ paddle shifts တွေတော့မပါဘူး။ Gear knob ပေါ်မှာရှိတဲ့ + နဲ့ - ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီး manual အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကတော့ မောင်းနေမကျရင် အခက်အခဲတွေ့စေနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ auto နဲ့ပဲမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အရေးတကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆီစားနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ အကြမ်းဖျင်း 13.8 km/L ရမယ်ဆိုပြီးတော့ GAC ကဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ဆီစားနှုန်းများပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက စမ်းသပ်မောင်းနှင်တုန်းက အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာ မောင်းနှင်တာမျိုး မလုပ်ရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ steering mounted controls တွေ၊ ရှေ့နောက် air-conditioning စနစ်၊ သားရေထိုင်ခုံအပြည့်၊ cabin ရဲ့ ကျယ်ဝန်းမှု၊ အင်ဂျင်ရဲ့ သန်သန်စွမ်းစွမ်းရှိမှုတွေပါဝင်တဲ့ compact SUV တစ်စီးကိုသာလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ GAC ရဲ့ GS4 2018 ဟာ ရွေးချယ်စရာစာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လေ့လာသင့်တဲ့ ကားတစ်စီးပါ။ ပြီးမှ တန်ဖိုးနဲ့ဈေးနှုန်းကို ချိန်ဆကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ သုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ်။”
GAC GS4 2018 GE
Length x Width x Height: 4,510 x 1,852 x 1,708 mm
Fuel Tank Capacity: 50-litre
Tank Capacity: 450-1410-litre
Curb Weight: 1,450-1,500kg
Engine Technic: Turbo
Engine Displacement: 1,495cc
Max. Power: 150bhp/5,000rpm
Max. Torque: 235Nm/1,450-4,250rpm
Rear Suspension: Multi-link Beam Independent Suspension
Brake System: Front: Ventilated Disc Brakes/Rear: Disc Brakes
Steering System: EPS (Electronic Power Steering)
SAFETY & ELECTRIC SYSTEM
Front Pre-tensions & Limit Stress Seatbelts
Rear Seats Three-point Seatbelts
Driver Seat Seatbelt United Alarm (Light and Video)
Front Passenger Seatbelt United Alarm (Light and Video)
Engine Immobilizer (w/Anti-Theft Alarm)
Smart Key+Button Starter
AVN System (Audio & Videos & Navigation)
Rear Windshield with Defogging & Defrosting Functions
Anti-Pinch & One-Shot Up-Down Function for Driver Window
Power Sunroof (Anti-Pinch)
Crash Automatic Unlocking
Side Mirrors with Defogging & Defrosting Functions
စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရန်နှင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရန်အတွက် အကူအညီပေးပါသော GAC Motor Myanmar အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိလျက်......
Yangon Water Bus မှ ရန်ကုန်တိုင်းအတွက် ပြည်ပမှ ဝယ်ယူထားသော ရေယာဉ်သစ် ၆ စီးဖြင့်ပြေးဆွဲသွားမည်